Iyo Chikamu 2: Kugadziridza kunounza hunyanzvi uye co-op modhi - Game point - Bhodhi nemitambo yemavhidhiyo
Ubisoft yakazivisa kuti zvitsva zveTom Clancy's The Division 12 zvichaburitswa muna Chivabvu 2. Mwaka wechi9: Yakavanzika Mubatanidzwa uye iyo itsva PvE modhi Kuverengera ichave inosimudzira yeinouya zita rekuvandudza 15. Season 9: Yakavanzika Alliance inowanikwa kune chero muridzi weChikamu 2 Iwo maWarlords eNew York.
Mwaka mutsva unoenderera mberi nenyaya yeChikamu uye inodzosa vamiririri kune mushure mechinangwa chavo chekukunda aimbove mutungamiriri weDivisheni akatendeuka-mutengesi. Nechinangwa chitsva, Kaputeni Lewis, pane zvakasununguka, Dhipatimendi rinofanira kuunganidza vakangwara uye vatore Vana vechokwadi vana vepamusoro-soro vasati vasangana naye. Mwaka wechi9 ndeimwe yemwaka mitatu yakarongerwa kuburitswa gore rese.
Nyowani sere-vatambi co-op modhi
Countdown inyowani uye yakanyanyisa co-op modhi umo vanosvika vasere veDivisheni vamiririri vanotumirwa kune magetsi fesheni uye kupihwa maminetsi gumi nemashanu kudzikamisa gwenya remagetsi uye kudzivirira kuvharika. Yakaiswa muzvikwata zviviri zvevana, vamiririri vanotanga munzvimbo dzakasiyana pamepu uye vanofanirwa kushanda pamwechete kuti vapedze dambudziko. Iyo Divisheni ichasangana nevamwe vavengi vanozivikanwa vavanofanira kuzvidzivirira kuitira kuchengetedza magetsi emagetsi. Chekupedzisira, vanofanirwa kufonera helikopta yekubuda nguva isati yapera.
Kutanga Chivabvu 12, iyo Know-How ficha inopa vatambi nzira nyowani yekusimudzira magiya avo uye kuwedzera base base stats sekukuvara, zvombo, uye hunyanzvi. Vatambi vanogona kuwedzera ruzivo rwavo nekushandisa zvese zviri mumutambo. Kuwanda kwezvinhu zvavanoshandisa zvakasiyana, ndiko kuwedzera kwemazinga avo. Iko kuziva-kuita kunobvumirawo vatambi kuti vawedzere zviteshi zvehwaro hwechinhu chimwe nechimwe uye kusvika padanho idzva remagetsi.
​Zvombo zvitsva nemidziyo: Iyo itsva yekuvandudza ichaitawo zvakasiyana-siyana zvezvinhu zvitsva, zvinosanganisira Heartbreaker gear set, zvinhu zvitsva zvekunze, zvinhu zvitsva zvakatumidzwa, nezvimwe. Mibairo yekuwedzera ichapihwawo kune vatambi vane Mwaka 9 Pass.
​Twitch Drops: Kubva Chivabvu 12 kusvika Chivabvu 31st, ese maTwitch streamers ari mukati The Division 2-Directory inokodzera madonhwe eTwitch. Izvi zvinoreva kuti vese vanoona vanowana mibairo yemahara kana vakanyoresa panguva ino The Division 2watch stream. Mibayiro inosanganisira imwe Legacy Cache, maviri High-End Cache, uye imwe Exotic Cache. Madonhwe anopiwa mushure meawa imwe neimwe, madonhwe ose anogona kuwanikwa mushure memaawa mana ekuona.
Vhiki yeMahara: Chivabvu 13-15, Chikamu 2 chinowanikwa paXbox Series X | S uye Xbox One consoles, PlayStation 5, PlayStation 4, Epic Games Store, uye Ubisoft Batanidza paWindows PC, pamwe neStadia, Luna, uye Ubisoft + inoridzwa mahara.
Tom Clancy's The Division 2 PS4 GOLD EDITION* 25,00 EUR tenga
Kare Viking zano mutambo Frozenheim ine zuva rekuburitsa
Inotevera Muroyi: Audio bhuku rakateedzana nezve muroyi Geralt
Monster Hunter World: Iceborn Update inounza masimba masimba uye nzvimbo itsva
New crowdfunding pamberi: mutambo webhodhi wakanzi "yakanakisa vhidhiyo mutambo wegore"
Desperados sepeni-ne-bepa - Pegasus uye THQ vanoshandira pamwe pane zano mutambo kurova